मायामा भोगीको यथार्थ चित्रण : 'जीवन एक भोगाई अनेक' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
मायामा भोगीको यथार्थ चित्रण : ‘जीवन एक भोगाई अनेक’
Posted by Anup Subedi | १२ श्रावण २०७४, बिहीबार १५:२१ |
– परिवर्तन देवकोटा
जीवन संघर्ष हो, भोगाई हो । मानिस जन्मिसकेपछि हुर्कन्छ र बिस्तारै मर्छ पनि । यहि जन्म र मृत्युबिच हुने उतार चढावलाई नै जिवन भन्न सकिन्छ । यहाँ फरक-फरक धारका, फरक-फरक विचारका र फरक-फरक व्यवहारका मानवको जन्म हुन्छ । त्यसैले नै फरक-फरक अनुभुतिको स्वाद लिन पाईन्छ । जिवन एक भोगाई हो । तर सबै मानिसले भोगाई एक जिवन हो नभन्न पनि सक्छन् । आफुले गरेको संघर्षहरुलाई प्रस्तुत गर्ने वा ग्रहण गर्ने शैली फरक फरक हुन्छ मानिसमा, हो यहि फरक फरक गुणका कारण न आज मानव हुनुको अस्तित्व रहेको छ ।
अरु भन्दा भिन्न रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न मानिस हरपल लागिरहेका हुन्छन् । तर पनि कतिपयले आफ्ना जिन्दगीको भोगाईलाई निकै मिठो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्दछन् भने कतिपयले तितो । साहित्य एउटा त्यस्तो पाटो हो, जसले जिन्दगीका अनेकौँ भोगाईहरु, तितामिठा पलहरु सहजै रुपमा निकै मिठो रुपमा स्विकार्नका निम्ति सहयोग गर्दछ ।विगत देखि वर्तमानसम्म हेर्ने हो भने साहित्य नै एउटा त्यस्तो औजार बनेको छ, जसले अनेकौँ स्वाद चखाईरहन्छ । विषयको तथ्य प्रयोग र श्रृंगारिक तथा संगीतात्मक विधा भएका कारणले नेपाली युवा पुष्ताहरुमा गजल व्यापक र सर्वमान्य बन्दै गएको छ ।
आफ्ना संर्घष तथा भोगाई अनि कल्पनाहरुलाई गजलका शेरहरुमा उतारी गजल क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरुको बाक्लै उपस्थिती रहेको छ । फरक यत्ति छ, कसैले गन्तव्यमा नपुगुञ्जेल कलम बिसाउँदैनन् भने कसैले आफ्नो उमेरको उर्लँदो समयमा सुरु गरि बिचमै कलम बन्द गर्दछन् ।
भावनाले भरिपूर्ण निर्मल आफ्ना मनमा उब्जिएका विभिन्न भावनाहरुलाई गजलमा उतारी पाठकहरुमाझ उदाएका छन् । गजल विधामा विशेष योगदान दिन भन्दै निर्मलले आफ्नो आदिम पुस्तक नै गजल बनाएका छन् । राष्ट्र प्रेमले ओतपोत भावना, तथा जीवनका अनेकौँ भोगाईहरुलाई भावनाले ओतप्रोत गरिएको पुष्तक हो ‘जीवन एक भोगाई अनेक’ ।
गजलकार निर्मल पुरी भोगीको यस गजल संग्रहमा आत्मनिर्णयको अभिव्यक्ति उनको मुल स्रोत भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । मानिस मानिसबिचको द्वन्द तथा विकृति विसंगतीलाई सहज एवम् सरल रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने खुवी भएका व्यक्ति हुन् उनी ।
गजलका शेरहरुमा व्यङ्गात्मक शैली प्रस्तुत गर्दै समाजमा विद्यमान विकृति विसँगतीहरुलाई निर्मल पार्नका निम्ति परिवर्तनको आवाज वुलन्द पार्ने काम गजलमा उनले गरेका छन् ।
क्रान्ति तिम्रो यही होला भाईभाईमा मारामार छ
एकै ठाउँको बस्ती फुटाइ बसाईँ सारासार छ ।
तिमी अझै समानताको नारा लगाई हिड्छौ ?
घरघरमा जातभातमै पानी बाराबार छ ।
उनको गजलमा समग्र राष्ट्रप्रेमको चिन्तन निकै सरल तरिकाले स्पष्ट हुन सकिन्छ । आधुनिकिकरण सँगै वर्तमान समयमा आफ्ना सँस्कार, सभ्यता र रहनसहन भुल्नेहरुका निम्ति उनले आफ्नो ध्यानाकर्षण गरेको पाईन्छ । जीवन जहाँ छ, समयले जिवनलाई जहाँ पुर्याएपनि मनलाई भने आफ्नै परिवेश, आफ्नै धरातलमा हुर्काउन उनले गजलका शेरहरुमार्फत सुझाव दिन्छन् ।
दौरा सुरुवाल, चोली, फरिया ढाका नभुल
आफ्नै गाउँ भीर पखेरा पाखा नभुल
अस्थिर राजनैतिक समस्या र सत्ताको लोभमा लागेका शक्तिहरुप्रति उनले गजलमार्फत नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
धेरै आए कुर्ची तान्ने केही गर्ने खालको कोही देखिनँ
देशलाई जीवन अर्पण गरी मर्ने खालको कोही देखिन ।
जीवनलाई सहज तथा सरल रुपमा प्रस्तुत गर्ने भोगीले आफ्ना सरलपनलाई गजलका शेरहरुमा नै उठाउन तत्पर छन्, भोगीको सरलता नै गजलले स्पष्ट पारेको छ भन्न सकिन्छ ।
बाँच्नु छ त केही गर सकारात्मक कार्यहरु
विवश भई सजायमा फाँसी किन जान्छौ ?
उनको गजल पढ्दै जाँदा म आफु नै उनको गजलको प्रत्येक पात्रमा म आफुलाई पाउँदछु, माया प्रेम, धोका जस्ता पक्षहरुलाई समेटेर वियोगान्त गजल लेख्ने गजलकारका रुपमा पनि निर्मललाई मैले पाएको छु ।
यहाँ जसलाई माया गरि मुटुमा बास दिईन्छ, उसैले मुटुमा छुरा हानेर क्षणिक सुख भोगमा जाने गर्छन, त्यस्तै कोहीको भने आफ्नै बाध्यता र विवसता हुन्छ, पहिलो प्रेमबाट अलग हुनुमा । यसलाई कसरी बुझ्ने, मन बहकिन थाल्छ । निर्मलका गजलमा समावेश प्राय गजलहरुमा यहि मन बहकाउने शेरहरु पाउन सकिन्छ । एकान्तमा बसेर प्रेयसीका यादहरुलाई गजलमा समेट्न सफल भएका गजलकार हुन् उनी ।
सम्झनामा हातमा देको फूलको के कुरा
घात गरी छाडी गयौ भूलको के कुरा ।
माया साँच्चै गरेको थिएँ स्वार्थी नभन्नु
अहिले तिमीले छोडेपनि मर्न सकिन ।
त्यस्तै उनका गजलका शेरहरुमा देश प्रेम, माया प्रेम मात्र नभई जिवन दर्शनका कुराहरु पनि समेटिएका छन् । यसबाट लाग्छ, निर्मल नाम अनुसारको काम गर्ने गर्दछन् । आफुले भोगेका हर भोगाईहरुलाई गजलका शेरहरुमा उतार्न सक्नु निर्मलको खुवी हो । उनले आफ्ना संग्रहमा जीन्दगीको समेत वर्णन गर्न भ्याएका छन् ।
जीवन द्रुतगामी रेलजस्तै हो
म भन्छु जीवन एक खेल जस्ते हो ।
फुत्किनै नसक्ने साङ्लोले बाँधेको
जीवन एउटा संघर्ष जेलजस्तै हो ।
निर्मललाई समयले गजलकार बनाएको छ । जिन्दगीका अनेकौँ भोगाईहरु भोग्दै आउने क्रममा उनले आफ्नो भोगाईलाई शब्दमा उतारेका छन् । अझ भनौँ गजलमा प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्र प्रेम, रीती थिती, सँस्कार, माया प्रेम, मिलन विछोड तथा जिन्दगीका अनगिन्ती भोगाईहरु समेटिएको गजल संग्रह हो जीवन एक भोगाई अनेक । जन्मेदेखि आफुले २० वर्षको उमेरसम्ममा भोगेका तितामिठा भोगाईहरु, बात्सल्यका कुराहरु, त्यस्तै माया प्रेमपछिको मिलन विछोडका कुराहरु निर्मलले गजलमा व्यक्त गरेका छन् । यो नै एउटा प्रमुख उपलब्धि हो ।
मैले निर्मलका यस संग्रहमा समावेश ७३ गजलहरु पढेँ । उनले यो गजलसंग्रहबारे पाठकिय धारणा दिनका निम्ति गरेको आत्मिय आग्रहलाई स्विकार्दा, उनी गजल आकाशमा चम्किन चाहने जोश, जाँगर भएका गजलकारका रुपमा लिगेको छु । आफ्नो कलिलो उमेरमा कृति निकाल्न कम्मर कसेका र कृति निकालीसकेपछि पनि समग्र्र वातावरणको महसुस गर्दै गरेका कारण निर्मल गजल आकाशमा चम्किलो तारा बन्ने कुरामा द्विमत छैन । आफ्ना जिन्दगीका भोगाईहरु शब्दमा उतार्ने क्रममा कतिपय कमजोरीहरु हुन्छन् नै त्यसलाई आफु अघि बढ्नका निम्ति प्रेरणको स्रोत सम्झि गजल लेखनमा निरन्तरता दिन जरुरी छ । लेखन निरन्तरताको शुभकामना ।
सत्ताको कुर्सी मात्रै तानातान् किन यहाँ
नारा जुलुस इँटा ढुङ्गा हानाहान् किन यहाँ
कसैको रातनै सडकको छेऊमा बित्ने
कसैलाई चाकडी मानामान् किन यहाँ
कायापलट ल्याउने युवा किन निष्क्रिय छन्
आन्दोलनको हतियार बन्छौ जानाजान् किन यहाँ ।
के पुग्ने ओहदामा अनि कसलाई तल राख्ने
नेतृत्व नै फेरिरहन छानाछान् किन यहाँ ।
हिड्छने अचेल अपराधी खुलेआम मुख देखाई
निदोर्षीलाई हतकडी बानाबान् किन यहाँ ।
Previousनेपाली क्रिकेटरहरुको एक वर्षको तलब आयो !
Next‘स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध’ : प्रधानमन्त्री देउवा
मध्य भोटेकोसीको बीस प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न
८ माघ २०७३, शनिबार १६:४०
तीजलाई मितव्ययी बनाउ : रामचन्द्र
२७ भाद्र २०७५, बुधबार ११:४२
गरिब र धनीले गर्ने खर्च संरचनामा ठूलो असमानता
७ असार २०७३, मंगलवार ०६:४५
विषाक्त रक्सी सेवनबाट धनुषामा चारजनाको मृत्यु
१४ असार २०७५, बिहीबार ०८:१९